China Vegetable muchero crate Kugadzira uye Fekitori | Lonovae
Miti inochengeterwa mabhasikiti inoiswa muzvitoro, hypermarket, matura, uye zvigadzirwa. Pane nzira mbiri dzekuisira. Nzira yekuisira zvinhu paunenge uchiisa zvinhu, uye nzira yekuisira kana uchifambisa mafuremu. Iyo inoshandiswa kurongedza miriwo, michero, zvinwiwa uye zvimwe zvinhu zvinoda kuiswa.
Kugadzira Muriwo Michero Crate-01
Divi 600 * 400 * 105mm
Pasuru 18pcs / atorwa
COLOR Dema (Inogona kugadzirwa.)
Kugadzira Michero YeMuriwo Crate-02
Divi 600 * 400 * 195mm
Pasuru 16PCS / katoni
Kugadzira Muriwo Michero Crate-03
Divi 600 * 400 * 245mm
Pasuru 14PCS / katoni
Colot Dema (Inogona kugadzirwa.)
Kugadzira Michero YeMuriwo Crate-04
Pasuru 10PCS / katoni
Ruvara Dema (Inogona kugadzirwa.)
Kubatsira kwemuriwo Stacking mabhasikiti
1.ISevha yekutakura muripo: Inogona kuchengetedza 70% kutakura mutengo uye chengetedza iyo inodhura yekutakura nzvimbo.
2the kuderera kwemari yekuchengetedza: Inogona kuchengetedza 70% mutengo wekuchengetedza.
3. Icho chitsva dhizaini, ine akasiyana marudzi emabasa.
4.Tinoshandisa zvinhu zvitsva pp kugadzira pane zvadzokororwazve kuitira kuti tigone kuona mhando yacho.
5.Tinopfuudza iyo SGS yekuyedza system kuve nechokwadi chemhando yezvinhu zvemhandara uye iye zvigadzirwa.
6.Tinoshandisa iyo jekiseni rose imwe nguva, saka tinogona kugadzira mabhasikiti matsva ekucheka kwakatsetseka uye akanaka maumbirwo, hapana akaomarara pamupendero.
7.Rimwe bhokisi rinogona kuremedza huremu hwakawanda kupfuura vamwe, isu tinoshandisa iyo nyowani dhizaini uye nekuwedzera mamwe mitsara pazasi.
8.Uye isu tinokwanisa kugadzirisa vatengi kuti vaprinte marogo avo uye pane yakakwana yekuchengetedza yekupa munguva.
Makapu emuriwo anogona kushandiswa pamiriwo, michero, toyi, chinwiwa, zvihwitsi uye chero zvinhu zvaunoda mumashopamaketi, zvitoro, zvitoro zviri nyore uye grocery.
Isu lonovae tine gumi nemazana ejekiseni muchina uye makumi mashanu mafuru anosangana kusangana zvakasiyana siyana zvaunoda. Tinogona kudarika zviuru gumi zvemabhasikiti kuburitsa. Uye isu tine makore gumi nemaviri-ruzivo-rwekutenga mall sevhisi, kusanganisira yakatsiga magetsi hupfu, masherufu emidziyo uye mabhasiketi evegtable nezvimwewo Uye zvehunhu, tinoshandisa mhandara nyowani PE garanules kubva kuChina-Korea Petroleum Corporation.Uye nezve nzvimbo, isu tiri muYangtze River Delta, padyo neShanghai, uye kune nzira dzakawanda dzegungwa pano. Zviri nyore uye nekukurumidza kutakura.
Zvadaro: HDPE biogas pepa